Sidee taajir Ku Noqon Karaa Aniga oo Wax Tuugnimo ah Sameyn | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » Sidee taajir Ku Noqon Karaa Aniga oo Wax Tuugnimo ah Sameyn
Sidee taajir Ku Noqon Karaa Aniga oo Wax Tuugnimo ah Sameyn
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 8-08-16 9:51 PM Horta calafka waa xagiisa balse ma isweydiisay sababta dadka qaar ay waxaas oo lacag u haystaan adiguna aad ku sari la’dahay? Aduunka waxkasta waxay u baahanyihiin dadaal dheeri ah iyo waqti, halkaan waxa ee Somaalistars kugu haysaa Hadii aad doneyso 7 arimood oo naga hortaagan taajirnimada.
1. Shaqaale ayaa tahay: Inkastoo aysan hubaal ahayn in aad ganacsiga ka taajirayso balse waxaa hubaal ah in aadan mushaar taajir ku noqonayn. Shaqooyinka lagu qaato mushaaraadka lagu taajiro waa kuwo aad faro ku tiris ah una baahan aqoon xad dhaaf ah.
Xalku ma ahan in aad maanta isaga tagto shaqadaada oo aad ganacsi ku boodo balse haddii riyadaadu tahay in aad milkiile noqoto waa in aad qorshaha bilowdaa inta aad shaqada haysato
2. Waxaad ka cabsataa qatarta: Dadka taajiriinta ah waxaa lagu yaqaan hal calaamad taasoo ah in ay aqoonsadaan fursadaha isla markaana ay ku dhaqaaqaan markii ay fursad helaan. Waa kuwo aan ka cabsan qatarta isla markaana aaminsan faa’iido iyo qasaaro labadaba. Ujeedadu ma ahan in aad xoogaaga aad aruurisay si indho la’aan ah aad meel ugu shubto balse waa in aad ku xisaabtantaa in haddii aad fursad walba uga cabsato qataraha la xiriirta in taajirnimo inta cirku kuu jiro ay kuu jirto.
3. Fikradahaaga wanaagsan kuma camal fashid: Waxaa jira dad ilaahay u siiyay hadiyad in ay la yimaadaan fikrado qiimo badan balse aan wax camal ah ku samayn fikradaha. Dadkaas waa riyo ku nool oo fikradahooda kama miro dhaliyaan. Waxaa jidha maahmaah English ah oo oronaysa “Put your money where your mouth is” taaso ah lacagtaada geli hadalkaaga. Marka haddii aad hayso fikrad caalami ah madaxmadax isugu tuur.
4. Ma taqaanid sida loo maamulo lacagtaada: Haddii aad tahay qof mushaar fiican qaata waxaa jira wadooyin badan oo aad taajir ku noqon karto haddii aad lacagtaaga si wanaagsan u maamusho. Waxaad samayn kartaa maalgashi, iwm balse waxaa ka horeysa in aad kayd samayso marka hore oo aad maamusho miisaaniyadaada iyo qarashaadka.
5. Ma lihid qorshe: Dadka aan lahayn qorshaha meel ma gaaraan. haddii aadan lahayn ujeedooyin aad doonayso in aad gaadho sida in aad guri dhisato, in aad ganacsi abuurto 2 sano gudahood iwm meeshaada kama dhaqaaqaysid. Marka aad samaysato yool waxay kuu sahlaysaa in aad iska ilowdo waxyaabaha yaryar ee qarashka ku galinaya adiga oo xooga saaraya in aad gaadho yoolka weyn.
6. Ma dadaashid: Taajirnimo laguma gaaro adiga oo hurda ama telefishinka daawanaya maalintii oo dhan. Si aad u noqoto mid horumar gaaraa waa in aad dadaalkeeda la timaadaa. Dadka taajiriinta ah waxaa lagu yaqaanaa karti iyo shaqo badan.
7. Dadka saxda ah xiriir lama samaysid: Taajir noqon maysid haddii aad waqtigaaga ku dhumiso dadka aan faa’iidada kuu lahayn. Marka aad yool samayso waa in aad ku xirantaa dadka kugu caawin kara in aad guul gaadho. Dadka horumarka sameeyay ee aad wax ka faa’idaysan karto waa in aad barataa oo saaxiib la noqotaa.